Ngubani onokundifundisa nge-Intanethi?
Izinto eziluncedo zeGumbi lokuGcina iAluminiyam
Yonke into malunga nokuhanjiswa kweeasethi
Iimpawu zoMdibaniso weKhonkrithi
Enye indlela kunye neziQendu eziQhelekileyo zeBar kwihlabathi liphela
Iindawo ezi-10 eziphambili zokuTyekelwa ngaphakathi nakwiAround Thekaddy
by UAnjali G
IKerala yindawo ekuphupha kuyo nawuphina umthandi wendalo. Ngelixa amanzi amdaka ngekristali abonelela ngegolide ngethuba lokuchitha ixesha elinomgangatho kunye nabantu obathandayo, ivumba leziqholo elisemoyeni lihlaziya umphefumlo wakho. Uhlaza oluhlaza macala onke luyanyanga…
Ukuhamba Ihlabathi: 11 Ukuphefumla Okunyanzelekileyo-Bona iZimanga zeNdalo
Zininzi iziza ezahlukileyo kwihlabathi jikelele ezifanelekileyo ukuba zityelelwe. Kodwa konke kuxhomekeke kuhlobo lomhloli okhoyo. Abanye abantu bayathanda ukubona izixeko ezitsha ezivela kwihlabathi liphela kwaye behlola iinkcubeko ezahlukeneyo, abanye bayaziphumlela…
Kutheni iQela lamaGqwetha lifuna ukwenza iimvavanyo ezihlekisayo rhoqo?
Matshi 12, 2019
Kwimeko yezemfundo, izilingo ezihlekisayo zenzelwe ukufundisa abafundi bezomthetho ukuba baqhele amava enkundla. Zonke iinkcukacha kunye nemigibe kufuneka ibandakanywe ukuqinisekisa ukuba zibonakala ziyinyani. Ngokuzama ukuhlekisa, amagqwetha aziingcali ayenokuqonda malunga namandla kunye nobuthathaka…
Iindlela zobuGcisa eziPhezulu eziza kuLawula uNyaka wama-2018
Ukuveliswa okumangalisayo, enye yazo ebandakanya ubuchule bokuqondwa kobuso kwi-Apple X ye-Apple, yayiyenye yezona zinto zibalaseleyo zoyilo lwenkqubo kunyaka ophelileyo. Ngelixa iindlela zetekhnoloji ziphila ixesha elifutshane, ukuqondwa kobuso kuya kulawula ishishini leapp kwi…
Uhlalutyo olunzulu lwazo zonke iintlobo zeFats
Nanini na usiva nantoni na enokwenza “ngamafutha”, isoloko ikwi-negative. Ngelixa kuyinyani ukuba amanqatha amaninzi awakulungelanga kodwa amanqatha asafunwa ngumzimba. Awuva kakhulu ngayo, kodwa umzimba wakho ufuna amanqatha ...
IiWebhusayithi ezi-7 eziLuncedo zokuHamba eUnited Kingdom
I-United Kingdom ibizwa ngokuba liLizwe eliKhulu hayi ngelize - kukudityaniswa kwamazwe amane kuseto olunye. I-Royal England kunye nokubona kwayo, iinqaba zamaxesha aphakathi kunye nezakhiwo zaseWales, ubuhle obumnandi beentaba ezintle kunye namachibi aseScotland, iilali zakudala…
Iimpazamo ezi-6 zoYilo lweWebhu awusakwazi ukuzihlawula
Disemba 19, 2016
Udale iwebhusayithi ebukekayo kodwa uyasilela ukubandakanya abasebenzisi okanye abasebenzisi bakhalaze malunga nokuhamba. Kusenokwenzeka ukuba kukho iimpazamo ezimbalwa zoyilo lwewebhu. Ngendlela efanayo, iwebhusayithi iluncedo kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa kodwa uninzi lwabasebenzisi bacinga…
Ukuthengiswa koMxholo vs Ukwakha ikhonkco
Kukho iiblogi ezininzi kunye neenkampani ze-SEO ezithetha izinto ezahlukeneyo ukuze zibekwe kwiphepha lokuqala likaGoogle. Kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo sizivavanye zonke ezi thiyori. Siza kubeka zonke ezi ithiyori ze-SEO ebhedini ...
I-2017 ye-Digital Marketing Trends yeeNgcweti ze-Real Estate kunye noSomashishini
I-2016 iyancipha, oku kuthetha ukuba uninzi lweengcali kunye noosomashishini sele begcwele umphunga ngaphambili xa kuziwa ekucwangciseni ukuthengiswa kwedijithali kunyaka ozayo. Ilungiselela ukuba ibengunyaka onomdla kumashishini amaninzi njengoko sisiya ku-2017, kwaye mhlawumbi…
I-10 ye-Graphic Design Trends ukuya kwi-Rock 2017 kunye nangaphaya
Oktobha 27, 2016
Iimpawu ziyavela, zibambe ingqalelo, zikhule zibe nkulu kwaye emva kwexesha elifutshane okanye ixesha elide ukusuka kwiinyanga ezimbalwa ukuya kwiminyaka ziyaphela kwindawo. Xa kufikwa kuyilo lwegraphic sibone iintsingiselo ezininzi kakhulu zivela kule minyaka imbalwa...
Oktobha 19, 2016
Ukhe waya kwindawo yezemidlalo. Usenokuba ubukhe waya kwi-ice bar. Kodwa ngaba ukhe wangena phantsi kwamaza ukuze athabathe isiselo kwindawo yokuntywila emanzini ngokupheleleyo? Kuthekani ngendawo yokuhlambela esidlangalaleni yajika indawo yokuphumla? Ukuba uyathanda…
Ukuqesha iPearson kwisikhululo senqwelomoya
Yintoni oyiphendulayo ekuqaleni xa ubona i-limousine? Enye yeempendulo zakho inokumothusa kuba isenokungafani kwindawo ohlala kuyo. Abanye abantu banoluvo lokuba ngabo kuphela abadumileyo abanokukhwela iimousini kodwa…
Izixhobo ezi-6 ze-Android Wonke uMphuhlisi kufuneka azi malunga
Kutheni le nto i-Android OS lolona khetho lukhethiweyo kubaphuhlisi? I-Android yenza izinto zilula kwaye yinkqubo yokusebenza yeselfowuni enokusebenziseka lula kakhulu. Ukwaziswa kwezixhobo ezininzi kwenze ukuba kube lula kubaphuhlisi be-Android ukwenza izinto ezintsha…
Ulibaleka njani iklasi yokuqala ngexabiso lesaphulelo
Ukuhamba kwiklasi yokuqala kukunethezeka abantu abaninzi abangenako ukufikelela kuko, kodwa ukuba unendiza ende phambi kwakho, ukuchitha imali eyongezelelweyo kuqala okanye kwiklasi yeshishini kunokwenza uhambo lwakho lukhululeke ngakumbi. Ukuba ubhukisha amatikiti akho kwi-intanethi, ngekhe ...
Indlela yoLonwabo kwiiMalayalees eMelika
IMalayalam ithathwa njengenye yeelwimi eziphambili zaseIndiya. Nangona iMalayalam ilulwimi lwaseIndiya, kodwa isetyenziswa kakhulu kwamanye amazwe afana neTamil Nadu kunye neKarnataka. Ngokophando, phantse i-38 yezigidi zabantu baseIndiya…
Izinto ezi-5 ekufuneka uyazi ngaphambi kokujoyina iAkhademi yoMculo
by UAlina J
Isikolo somculo liqonga elibaluleke kakhulu kubo bonke iimvumi ezinomdla, abafuna ukubumba izakhono zabo ngokuba yinxalenye yendawo encedisa ekuveliseni iimvumi eziguquguqukayo. Abanye abantu bathi, ukuba unesiphiwo ngokwenene…
Ungamnceda njani umpheki wakho ukuba afezekise ibhalansi yomsebenzi-wobomi
by UAnjali D.
Ukuba ngumpheki ophezulu kwindawo yokutyela eyaziwayo kuthetha ukuba uyingqayizivele kwaye uhloniphekile kwishishini lokubuka iindwendwe. Umpheki angenza okanye aphule indawo yokutyela. Ndiyayazi indawo yokutyela enomculo odlalayo kufutshane nam apho umculo wawudlala khona kodwa…
Thatha uhambo oluya eDelhi ukulujonga ngokungafaniyo nakuqala
INew Delhi sisixeko esikhuthazayo nesinomdla nangona kunjalo kunokuba nzima kubantu abaza kothuka bengazi kakhulu ukuba mabenze ntoni esixekweni. Eli nqaku alikuxeleli ngezizathu zokulangazelela isixeko…
Asia/Izikhokelo zohambo/Uhlolo lokuhamba
Izinto ezimnandi zokuzonwabisa eDubai
Bhatala uhambo oluya e-Dubai, indawo ekuma kuyo phakathi kwezona zikhangelwe emva kokuya emhlabeni kunye namava azo zonke izinto ezimnandi eziziswa sisixeko etafileni. Eli nqaku lixoxa mhlawumbi zezona zinto zipholileyo kwaye zimnandi onokuzenza ngelixa…
Ugcina njani ngakumbi kwindlela yakho elandelayo ye-LA
Ukuhlala ungonga ngendlela kuhambo olunzima kunokuba nzima, kodwa kunokwenzeka ukuba ucwangcisa kwangaphambili kwaye unamathele kwizicwangciso zakho. Ukucwangcisa uhambo oluya eLos Angeles kunokuba nzima kakhulu kunokubona kwaye wenze, kungumbono olungileyo ukunika…
Iingxaki eziqhelekileyo zokulala zidibene ngaBantwana kunye nendlela yokuzisombulula
Ngaba umntwana wakho ufumana iingxaki zokulala kwakhona? Ukusilela ekujonganeni ngokufanelekileyo nengxaki kunokuba yinto enzima kuwe nomntwana wakho. Izifundo ezininzi zibonisa ukuba abantwana abanemikhwa engalunganga yokulala baya kuba namava okwehla komzimba kunye nokukwazi ukufunda. Omkhulu…
1 2 3 ... 386 Okulandelayo
Kukho abo bakholelwa ukuba ubomi apha baqala phaya… kude kakhulu kwindalo iphela, kunye nezizwe zabantu abanokuba ngookhokho bama Yiphutha okanye amaToltec okanye ama Mayan. Abanye bakholelwa ukuba kusenokubakho abazalwana bomntu abathi ngoku balwe ukuze baphile phaya ngaphaya kwamazulu.
Iziganeko kunye neeMbasa15
Lo myalezo wephutha ubonakala kuphela kwi-WordPress admins
Imposiso: Akukho sondlo sifunyenweyo.
Nceda uye kwiphepha lezicwangciso ze-Instagram Feed ukwenza isondlo.